Fursadaha Maalgashi Shisheeye ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Horumarinta Gobolka Washington|Maalgelinta Tooska ah ee Dibadda (FDI)
Istaraatiijiyadda FDI waxay dhiirigelinaysaa maalgashiga Gobolka oo dhan
Maalgashiga shisheeyaha ayaa si xawli leh uga socda dalka oo dhan. Kadib hoos udhac yar inta lagu gudajiray hoos udhacii weynaa, maalgashiyadu waa xooganyihiin markale, iyagoo kor ukacaya $ 373.4 bilyan wadanka oo dhan. Gobolka Washington wuxuu diirada saarayaa soo jiidashada maalgashi tayo leh oo taageera istiraatiijiyadeena qeybaha muhiimka ah taas oo gacan ka geysan doonta barwaaqada iyo kobaca dhaqaalaha ee gobolka oo dhan. Qeyb ka mid ah Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha iyo Tartanka, kooxda FDI ayaa suuq geynaysa gobolka maalgashadayaasha mustaqbalka ee adduunka.
Soo jiidashada maalgashiga shisheeye ee mashaariicda Gobolka Washington waxay badanaa ubaahantahay sanado iskuxirid, shirar iyo dabagal.
Furaha guusha waa dhisida xiriiro shaqsiyeed iyo muujinta in Gobolka Washington uu yahay mid ku habboon mashruuc gaar ah ama istiraatiijiyad maalgashi dhagaystayaasha caalamiga ah ee go'aamiyaasha muhiimka ah.
In kasta oo heerkan dhisidda xiriirka uu qaadan karo sanado, xitaa tobanaan sano, si dib loogu soo celiyo maalgashiga, haddana Kooxda Waaxda Ganacsiga ee FDI waxay ku guuleysatay inay soo galaan dhulal adag dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Marka laga soo tago ka shaqeynta qaar ka mid ah mashaariicda waaweyn, sida maal gashiga $ 1.8 billion ee ay Innovation Works ku sameysay xarumo cusub oo ku yaal Kalama iyo xarunta cusub ee duulimaadka MRJ-90 ee Mitsubishi ee ku taal Moses Lake, waaxda ganacsiga ayaa soo hubisay soona saartay faylalka mashaariicda maalgashiga. dhowr luqadood. Qoraalkan, oo ka kooban qiyaastii 50 mashruuc, ayaa lagu soo bandhigay in ka badan darsin bandhigyo Mareykan iyo caalami ah, oo ay ku jiraan ergooyinka ganacsiga ilaa Jabaan, Kuuriya iyo Shiinaha.
Baltic Crystal waxay sameysaa $ 3.6 milyan maalgashi
Waaxda Ganacsiga waxay la midowday Ururka Horumarinta Dhaqaalaha ee Camas-Washougal iyo CREDC si loo soo jiito Baltic Crystal oo saldhigeedu yahay Latvia aagga Vancouver.
Helitaanka $ 3.6 milyan waxay ku lug yeelan doontaa cusbooneysiinta xarunta jirta iyo shaqaalaynta 70 shaqaale cusub si ay u sii wadaan soo saarista safayr been abuur ah oo loogu talagalay qaybaha tikniyoolajiyadda sare iyo hawada sare.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan maalgashiga.
Guul xusid mudan ...
Teknolojiyadaha AstaReal - Faraca Kiimikada ee Fuji ayaa warshad ka furtay Moses Lake si ay u soo saarto kaabis cusub oo antioxidant ah oo taageerta caafimaadka wadajirka iyo lafaha. Shaqooyinka la abuuray: 45.
Booking.com - Waxaa laga furay magaalada Bellevue xafiiskeedii seddexaad ee adeegga macaamiisha Mareykanka kaasoo u adeegi doona suuqyada Aasiya iyo Baasifigga. Shirkadda fadhigeedu yahay Amsterdam waxay abuureysaa ilaa 350 shaqooyin cusub.
Conair / Aero-Flite - Waxay furtay saldhig lagu dayactirayo laguna dayactirayo raxankeeda diyaaradaha dab-demiska hawada ee Spokane. Shirkadda Canadian-ka ah waxay ka shaqeysaa 65 xarunta.
Aerostructures Fokker - Waxaa laga furay Mukilteo xarun cusub oo ka taageerta silsiladda sahayda aerospace ee gobolka qaabab fudud. Shirkadda fadhigeedu yahay Netherlands waxay abuurtay 70 shaqo oo cusub.
MTorres - Alaab-qeybiye Isbaanish ah oo qalab iswada teknolojiyad sare u leh aerospace iyo waraaqaha warshadaha ayaa xarun cusub iyo is-dhexgal ka furay Everett iyo xarunteeda Mareykanka ee Bothell. Wadarta shaqada: 100.
Waa maxay sababta Washington?
La xiriir kooxda maalgashiga shisheeye ee tooska ah ee Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha iyo Tartanka 206-256-6100.